Semalt waxay sharraxeysaa faa'iidooyinka sare ee kaabayaasha ganacsiga yaryar
Shirkad yar ayaa laga yaabaa inay ubaahantahay hawlo qandaraas hoosaad ama qeybo ka mid ah ganacsigahawlgallada loo fidiyo adeeg bixiyaha ganacsiga saddexaad. Haddii aad go'aansato inaad wakiilatomas'uuliyadaha qaar ee xisbi ku salaysan waddan ajnabi ah, oo loo gudbiyomaadaama ay ka baxayaan dibadda. Maanta, si loo yareeyo kharashyada hawlgalka ganacsiga, dad badanganacsiyada yaryar waxay doorbidaan dibadda si ay ugu bedelaan shaqo kale.Michael Brown, Maamulaha Guusha Macaamilka ee Semt Adeegyada Dijital ah, wuxuu wax ka sheegayaafaa'iidooyinka muhiimka ah ee bixinta ganacsiga yaryar
Ka wareeji kharashka isbeddelaya. Tusaale ahaan, waxaad leedahay xisaabiye ku meel gaadh ah.Isaga ama iyada ayaa u baahan doona miis, kumbuyuutar, caymiska caafimaadka, shaaha, iyo mushaarka bishii,oo weliba ay tahay bilawga, waxaa laga yaabaa inaanay shaqo badan lahayn dhammaan shaqaalaha bilowga.Dibad-bixintu waxay xallinaysaa caqabadani. Marka aad bixiso xisaabinta ganacsigaagaMasuuliyaadka, waxaad bixisaa lacagta bilowga ah ee shaqada la qabtay, uma baahnid inaad bixisokhayraadka iyo, xaqiiqda, waxaad helaysaa shaqo ka sii wanaagsan tan iyo markii aad bixiso oo keliya mushaharkaagawaxaa si fiican loo qabtaa. Xitaa haddii hawsha aad bixiso ay soo noqoto, waad awoodi kartaahad iyo jeer shaqaaleyso qof kale marka xigta.
Waqti dheeraad ah u hesho dhinaca ganacsiga waxyaabaha. Milkiilayaasha ganacsigasi daacad ah uma haysan karto wakhtiga lagu daryeelayo dhinaca farsamada ee iyagaganacsiga. Tani waxaa ku jira waxyaabo ay ka mid yihiin naqshadda webka, suuq-geynta, SEOiyo wax ka badan. Adiga oo bixiya masuuliyadahaas, waxaad yeelan doontaa awaqti badan oo gacmahaaga si aad u daryeesho ganacsiga lafteeda. Focus focusfiiro ku qanacsanaanta macaamilka iyo u ogolow dadka kale inay farsamo sameeyaanwaxqabadyada adiga kugu habboon.
Helitaanka dhaqaalaha qiyaasta isku midka ah sida ciyaartoyda warshadaha waaweynIsticmaal. Ciyaartoyda wax soosaaraya ee weyn ee ku jira nuugaaga ayaa awood u leh in ay guri ku leeyihiindad badan oo tayo leh, taasina waxay ku dhejin doontaa farriin ka hor. Adiga ma sameyn kartidawood u leh inuu heysto tayada guriga dhexdiisa ah. Dibad-bixintu waxay ku siinaysaa fursadshaqaaleysiiye tayo sarre oo qiimihiisu hooseeyo oo aan ka iman waddankaaga laakiin ka baxsan dibadasidoo kale. Maadaama aysan tani noqon mid kharash ah, waxaad awoodi doontaa inaad kaydiso lacag
Xooga saar kheyraadka dadka ee loo baahan yahay. Shaqaaleynta iyo tababarkaShaqaaluhu waa qaali. Inaad noqoto bilawga, ganacsigaaga ganacsigu aad ayuu u yaryahaywuxuu kula joogi doonaa waqti gaaban, taas macnaheedu waa shaqaalahaasaad tababarka ku bixisay kharashka ugu dhakhsaha badan wuxuu bilaabi karaa inuu shaqeeyo qof kale. Si looga fogaadoDhibaatooyinkaas oo dhan ee qorista, tababarka iyo dejinta, oo kaliya haadeegga bixinta adeegga ayaa shaqada kuu qabanaya.
Hoos u dhig qiimaha alaabtaada iyo adeegyadiinna. Runtu waain dibadda loo dhigo mid la awoodi karo isla markaana waqti isku mid ah, waxaad heleysaa tayo sareshaqada la qabtay. Way ka raqiisan tahay markaad rabto in aad cilmi baaris ku samaysohorumarinta wax soo saarka, suuq-geynta, qaybinta iyo bixinta ganacsigaaga.Qiimaha firfircoonida ganacsiga ee sarreeya waxay ka dhigan tahay qiimaha sare ee alaabtaadasidaa daraadeed waa inaad macaamiishaada u gudubtaa kharashaadka
Ugu dambeyntii, dibad-bixinta waa sahlan tahay. Bixinta hawlaha ganacsiga sida videoedebinta, suuq-geynta, maareynta warbaahinta bulshada, horumarinta content iyowax badan oo kale waa sahlan tahay. In Sare Adeegyada Dijital ah, waxaad ka heli kartaa hibokhabiirada warshadaha oo doonaya inay shaqo fiican u qabtaan. Macaamiishayadu waxay leeyihiincadeeyeen wax ku oolnimada iskaashiga noocan oo kale ah, sidaa darteed hadda laga bilaabo, waxaad awoodi kartaasidoo kale waa ku raaxaystaa faa'idooyinkaas Source .